Ny programa demonstratera Airbus 'BLADE dia mandresy ny Aviation Week Laureates Award ho an'ny teknolojia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny programa demonstratera Airbus 'BLADE dia mandresy ny Aviation Week Laureates Award ho an'ny teknolojia
Tamin'ny lanonana iray tany Washington DC, nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny Aviation Week Laureates 2018 ho an'ny varotra, teknolojia ny programa mpanatontosa Airbus 'BLADE. Ny ekipan'ny mpitsara dia nahafantatra ny ekipa tamin'ny fanatontosana ny programa demonstrator flow laminar elatra be indrindra natao hatrizay ho an'ny fiaramanidina ara-barotra. Ny tetik'asa BLADE - izay mijoro ho "Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator any Eropa" - dia ao anatin'ny programa Clean Sky tohanan'ny EU, ary asaina mandinika ny fahafaha-mampiditra teknolojia elatra mikoriana laminar amin'ny zotram-piaramanidina lehibe iray. Izy io dia mikendry ny hanatsara ny dian-javaboahary fiaramanidina, hitondra fihenan'ny 50% ny fikorontanan'ny elatra ary hatramin'ny dimy isan-jato ambany ny famoahana CO2.
Hoy i Axel Flaig, SVP an'ny Fikarohana sy Teknolojia ao amin'ny Airbus: “Voninahitra lehibe izahay nahazo ny mari-pankasitrahana ny Avatar Week Week ho an'ny teknolojia. Izaho koa dia mirehareha amin'ny zava-bitan'ireo ekipa BLADE ao Airbus sy amin'ireo orinasa mpiara-miasa aminay Clean Sky. Miara-mitarika hatrany amin'ny làlan-kizorana amin'ny ho avin'ny varotra ara-barotra izahay. ”
Tamin'ny volana septambra 2017 Airbus 'A340 laminar-flow "BLADE" fiaramanidina mpanao fihetsiketsehana mpanadihady (A340-300 MSN001) dia nahomby tamin'ny sidina voalohany ary nanomboka teo dia nanao fanandramana mahomby hijerena ireo toetran'ny elatra amin'ny sidina. Ny fiaramanidina, antsoina hoe 'Flight Lab', no fiaramanidina fitsapana voalohany eto amin'izao tontolo izao manambatra profil pamin'ny laminar transonic miaraka amina rafitra fototra anatiny tena izy.
Etsy ivelany ny fiaramanidina dia manana elatra ivelany misy laminar transonic, raha ao anaty tranony kosa dia misy tobin'ny test-instrumentation (FTI) manam-pahaizana manokana momba ny sidina. Ny fanovana be dia be tamin'ny fiaramanidina fitsapana A340-300 dia nitranga nandritra ny fety niasa 16 volana tany Tarbes, France, niaraka tamin'ny fanohanan'ny mpiara-miombon'antoka indostrialy manerana an'i Eropa. Mikasika ny teknolojia fitsapana, 'voalohany' niavaka dia nahitana ny fampiasana fakantsary infrared hanaraha-maso ny teboka tetezamita mikoriana sy ny mpamorona akustika izay mandrefy ny fiantraikan'ny akustika amin'ny laminarity. Ny iray hafa voalohany dia ny rafitra reflektometry manavao izay mandrefy ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny fotoana tena izy mandritra ny sidina. Mandrak'androany ny Flight Lab dia nahavita adiny 66 sidina.